Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Ukraine na European Union bịanyere aka na nkwekọrịta Open Skies
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa Ukraine
Nkwekọrịta EU-Ukraine Open Skies ga-abụrịrị nke Ukraine na obodo ọ bụla so na European Union ga-akwado iji wee rụọ ọrụ.
A na-atụ anya na nkwekọrịta mpaghara mpaghara nkịtị ga-emepe Ukraine ruo ụzọ ndị dị ọnụ ala karịa ma kwalite njem nlegharị anya.
Ugbu a, Ukraine nwere nkwekọrịta ọrụ ikuku ikuku nke abụọ na mba European Union ọ bụla.
Nkwekọrịta ọhụrụ na EU na -akọwapụta na a ga -ebuli ihe mgbochi na ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu.
European Union (EU) na Ukraine binyere aka na nkwekọrịta mpaghara mpaghara ụgbọ elu nke ga -ewepụta oghere ụgbọ elu ọnụ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi onye isi ala Ukraine kwuru.
A na-atụ anya na nkwekọrịta mpaghara ụgbọ elu nkịtị, nke a na-akpọkarị Open Skies Treaty, ga-emepe Ukraine ruo ụzọ ụgbọ elu dị ọnụ ala karịa ma kwalite njem nlegharị anya, n'ihi mmeju iwu nke ụkpụrụ na iwu ndị Europe na mpaghara njem ụgbọ elu.
Ugbu a, Ukraine nwere nkwekọrịta ọrụ ikuku ikuku nke abụọ na mba EU ọ bụla. Ha tinyere mmachi na ọnụ ọgụgụ ndị na -ebu ya na ụgbọ elu kwa izu. Nke a mere ka o siere ndị na -ebu ụgbọelu ike ịbanye n'ụgbọ elu ndị a ma ama.
Nkwekọrịta ọhụrụ ya na EU na -akọwapụta na a ga -ebuli mmachi na ọnụ ọgụgụ ndị na -ebu na ụgbọ elu. Onye ọ bụla na -ebu ikuku ga -enwe ike ife efe n'okporo ụzọ a ma ama, ọ bụghị naanị ndị na -achị naanị ya. Nke a pụtara na ndị ụgbọ elu dị ọnụ ala ga-enweta ohere ịbanye n'ahịa.
Ryanair, maka otu, ekwuputala “mmụba ike” na Ukraine ozugbo mba ahụ sonyere n'ahịa ụgbọ elu mepere emepe emepe emepe emepe, yana atụmatụ imepe ụgbọ elu site na ọdụ ụgbọ elu Ukraine 12 karịa nke ugbu a 5, yana imepe ọrụ ụlọ.
Tinyere ụgbọ elu ọhụrụ, ndị njem nwere ike ịtụ anya ozi ọma karịa - a na -atụ anya na ọnụ ahịa tiketi ga -agbada n'ihi asọmpi na -abawanye na njedebe nke monopolies n'akụkụ ebe ndị ama ama. Ọzọkwa, a ga -ebelata ọnụ ahịa n'ihi nkwekọrịta na -enye ikike ụlọ ọrụ ụgbọelu ọ bụla ijikwa ndị njem n'ọdụ ụgbọelu.
Ewezuga ndị njem, a na -atụ anya na ọdụ ụgbọ elu mpaghara Ukraine ga -erite uru na mgbanwe ndị a. Ha ga -enweta ụgbọ elu karịa ma nwee nnukwu njem ndị njem. Nke a pụtara na ọdụ ụgbọ elu mpaghara ga -enwe ohere maka itinye ego na mmepe.
Ọzọ gbakwunyere nkwekọrịta maka ndị njem Ukraine bụ iwebata European Union ụkpụrụ na ụkpụrụ na ụgbọ elu obodo Ukraine.
Onye isi ala Ukraine Volodymyr Zelensky, Onye isi oche nke European Council Charles Michel, na Onye isi oche nke European Commission Ursula von der Leyen gara emume mbinye aka ahụ.
Nkwekọrịta ahụ, nke etinyere na nzukọ ọgbakọ 23 na Ukraine na EU na Kiev, ga-emepe ahịa ikuku nke Ukraine na EU ma kwalite nchekwa ikuku, okporo ụzọ ikuku na nchedo gburugburu ebe obibi, ụlọ ọrụ mgbasa ozi onye isi ala kwuru na nkwupụta.
Nkwekọrịta ikuku nke EU-Ukraine ga-abụrịrị nke Ukraine na nke ọ bụla kwadoro European Union steeti otu ka ọ ga -amalite.